Igumbi elihle le-2,5 igumbi elikufutshane ne-Basel - I-Airbnb
Igumbi elihle le-2,5 igumbi elikufutshane ne-Basel
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguSylvia
Kwindlu yethu enkulu, eqaqambileyo, ulwazi lunokufumaneka ukonwabela iintsuku ezimbalwa zeholide kunxantathu.
Nokuba basehlathini eliMnyama, iVosges iyafa, ngokutsho kweRust, ukuya eBasel, okanye yonke iSwitzerland VISIT bafuna ixesha elifutshane kakhulu elinokwenzeka.
Ukuya kuthi ga kwi-4 abantu banokuziva bekhululekile ukuba kunye nathi.
Iindwendwe zethu zihlala kwindawo ebanzi ye-2.5 yegumbi le-90 m2, kwindlu yentsapho enye kwindawo yokuhlala ezolileyo kwindawo eluhlaza. Le ndlu ineholo yokungena, ikhitshi elivulekileyo (ifriji, imicrowave, umenzi wekofu, umpheki wamanzi, ikofu, iti, itoaster, iseti yefondue, iRaclettset, isitovu segesi, umatshini wokuhlamba, njl. njl.), igumbi lokuhlala eli-1 elinebhedi yesofa yabantu aba-2. , I-TV / irediyo kunye ne-wireless, igumbi lokulala eli-1 elineebhedi ezi-2 ezingatshatanga, i-wardrobe kunye nefenitshala yeofisi, intsimbi, i-WC / ishawa, isomisi seenwele.
Kubandakanywa nelinen yebhedi kunye neetawuli zokuhlambela.
Kwigadi yethu enkulu, isihlalo siyakumema ukuba uhlale, kunye nedama lokuqubha. Iindawo zokupaka ezimbini zasimahla zikwakhona.
Sifumaneka kufuphi nesixeko sase-Basel (i-3 km), ngokuthe ngqo kumda kunye neSwitzerland, apho uthatha izithuthi zikawonkewonke, ibhasi 38 +31, ngokulandelanayo, i-tram ye-6, ukufikelela ngexesha elifutshane kumbindi wesixeko sase-Basel.
Yonke imiboniso emikhulu ikwixesha elifutshane kakhulu ngezithuthi zikawonke-wonke.
Ngemoto ufikelela eJamani / eMzantsi Baden / Weil
kwiRhini ngemizuzu eyi-15.
Ukuze ufike kwi-Rust, udinga i-45 yemizuzu.
Euroaiport Basel / Mulhouse kunye nemotoway
(eFransi, eSwitzerland, eJamani) kwimizuzu eyi-10.
Udluliselo lwesikhululo seenqwelomoya ngesicelo.
Ngolwazi oluthe vetshe malunga (UMQULATHO OBULUNTU OFIHLIWEYO) bnbbasel.
Ifanele indawo yokuhlala ixesha elide (ixabiso elithotyiweyo). Ukuhlala jonga iphepha lasekhaya.
4.92 · Izimvo eziyi-15
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$520
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hégenheim